AbaThengisi boBunqunu be-Nude kunye neFektri- Abenzi baseTshayina abangamaNude
I-Silicone Push Up yabasetyhini yangaphantsi yangaphantsi engabonakaliyo i-Bra Self Adhesive Strapless Bandage yeBra Solid yabasetyhini
Ukuzinamathela, i-100% ekhuselekileyo kunye ne-silicone enobungozi kulusu, ithambile kwaye ikhululekile ukunxiba, ilungele ulusu olubuthathaka. I-silicone enamathela eqinileyo ihambelana nomlinganiso wakho ngaphandle kokuhlala kwindawo, gubungela yonke indawo yecala lobisi ngokuqaqambileyo. Indlela ethe-ethe yokuhamba nge-bra-ngaphantsi.
ishushu sexy up Backless Deep cleavage ingelosi yomtshato isimahla bra umzi-mveliso ngokuthe ngqo ukuthengisa iMango Engabonakaliyo i-bra
Imibele ebunjiwe ngumango inamathela kwikomityi kwaye ibambe ibele. Side ibisi. Uyilo oluhlanganisiweyo lwebhanti. Uyilo olungena-nipple-olukhusela amabele. Uyilo lwendandatho yensimbi, akukho mkhondo. Impilo ye-bio-gum, engahambelaniyo kwaye akukho lula ukuyiyeka.
Ukuthengisa ngokuthe ngqo kumgangatho Umfazi oMgangathweni oziphetheyo oDibeneyo Zi-silicone ezingabonakaliyo nge-Bonyeza iqhosha eliSitayile esingenamqolo I-Bra Bast engenayo iBreak yabasetyhini.
Isiqwenga esinye esingabonakaliyo se-silicone yesifuba. I-backless ayibonakali kwaye ilungele onke amaxesha. Impilo ye-bio-gum, ngokwendalo engabalulekanga, ingabinamanzi kunye nobungqina besithukuthezi, akukho lula ukuwa. Kukho iringi enkulu yentsimbi ngaphakathi yokuxhasa isifuba kunye nokuthintela isifuba ekubeni singakhuli.